केयुकेएलको बाह्रौं वार्षिकोत्सवः मेलम्चीको पानी आउन अब धेरै समय नलाग्ने खानेपानी मन्त्री मगरको दावी ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
केयुकेएलको बाह्रौं वार्षिकोत्सवः मेलम्चीको पानी आउन अब धेरै समय नलाग्ने खानेपानी मन्त्री मगरको दावी ?
प्रकाशित मिति १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:१६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले उपत्यकाबासीले भोगिरहेका खानेपानीको समस्या हल गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सक्षम भएर मेहनतका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
केयुकेएलको बाह्रौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले काठमाडौं उपत्यकाबासीले बर्षौंदेखि झेलिरहेका समस्यालाई अब हल गर्नुपर्ने दिन नजिकिंदै गईरहेकाले केयुकेएल सक्षम बन्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘मेलम्ची आईसकेपछि तपार्ईहरुले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्री मगरले भनिन्, ‘ तपाईहरुले सुरुका केही वर्ष धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । यो समयमा सायद भोक र निद्रा नभनी काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि तयार भएर बस्नुहोला ।’ मेलम्ची जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले केयुकेएलले चुस्त व्यवस्थापकीय ढंगबाट काम गर्नुपर्ने मन्त्री मगरले बताइन् । हिजोको कठिनाई, समस्या र अप्ठ्यारो भोगाईबाट पाठ सिक्दै अब परिश्रमका साथ काम गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताइन् ।
बार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘मेलम्चीको पानी आउन अब धेरै समय छैन । मेलम्चीको पानीको सही व्यवस्थापन गर्न केयुकेएल प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । केयुकेएलको कार्य क्षमताका विषयमा आम जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।’ केयुकेएलको भूमिका र उद्देश्य निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री मगरले यस संस्थाको गरिमा बचाई राख्न आग्रह गरिन् । उनले मन्त्रालयले केयुकेएललाई सक्षम र मजबुत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखिन् ।
मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले केयुकेएलको भूमिका बढ्दै गएको बताउँदै यसलाई अझै सुधार गरेर र क्षमता बढाएर अघि गरेर बढ्नुपर्ने बताए । सचिव बेल्बासेले पुरानो वितरण प्रणालीलाई नछोडीकन मेलम्चीको पानी पनि समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा मन्त्री मगरले केयुकेएलले गुनासो सम्बोधन गर्न विकास गरेको मोबाइल एप र रिजर्भवायर पानी ट्यांकीमा पानीको क्षमता मापन गर्ने प्रविधिको सार्वजनिक गरेका थिए । धारामा पानी आए नआएको र चुहावट भएको अवस्थाबारे जानकारी दिने र गुनासो सम्बोधन गर्नेगरी एप तयार गरिएको छ ।
सो कार्यक्रममा काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्चिव कुमार राणाले केयुकेएलका आगामि दिनमा आउने चुनौतिका बारेमा बोल्दै शुभकामना दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीको वारेमा केयुकेएलका कार्यकारी प्रमुख मिलन शाक्यले प्रकाश पारेका थिए । वार्षिकोत्सव समारोहका संयोजक प्रकाशकुमार राईले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्मचारीहरुको उत्साह जनक उपस्थिति रहेको थियो । मन्त्री मगरले केयुकेएलमा कार्यरत अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिन भने उत्कृष्ट शाखाहरुलाई पुरस्कृत गरेकी थिइन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाले निर्णय
काठमाडौं । नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पोखरामा यसरी गरियो सागको उद्घाटन (फोटो फिचर)
पोखरा । १३ औं दक्षिण एसियाली अन्तर्गत पोखरामा हुने खेलको सोमबार औपचारिक सुरुआत भएको छ । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री…
महाधिवेशनको विषयले कांग्रेस शीर्ष नेताहरुबीच विवाद
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टीको १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद भएको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार चार…
भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच हजार उजुरी थपिए
काठमाडाैं । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको…
सडक खन्दा पहिरोको जोखिममा विद्यालय भवन
काठमाडौं । ओखलढुंगाको लिखु गाँउपालिका ३ स्थित भिमसेनस्थान माध्यामिक विद्यालयमा पहिरो जादाँ पठनपाठन प्रभावित भएको छ । कक्षा १…
तस्करीको ३३ किलो सुन भरिया सनम हत्या प्रकरणको अनुसन्धान नयाँ मोडमा
विराटनगर । तस्करीको ३३ किलो सुन गायब भएसँगै भरिया सनम शाक्यको हत्या प्रकरण जटिल बन्दै गएको छ । पछिल्लो…
खरिपाटीमा स्थानीय डराएपछि घर–घरमा प्रजिअ, स्वास्थ्यमन्त्री पनि जाँदै
वाइडवडी जहाजले आजदेखि नियमित उडान भर्दै
बलात्कार प्रयास मुद्दामा महराले पाए सफाइ
कृषकलाई यान्त्रिक हलो प्रदान
गोदावरीका वडैपिच्छे अवैध प्लटिङ
मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गामा बाबुरामलाई तान्ने सरकाररी तयारी
ललितपुरको लेले सामुदायिक वनमा नग्न अवस्थामा युवतीको शव भेटियो
महराको मुद्दा समय अभावले हेर्दाहेर्दैमा, भोलि फैसला आउने
चन्द समूहका जिल्ला सेक्रेटरी पक्राउ
नयाँबसपार्क शुद्धीकरण अभियानमा ५७ पक्राउ, वेश्यावृत्तिमा संलग्न देखि गेष्टहाउस सञ्चालकसम्म फेला परे
महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा सफाइ
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 24 views
सेक्स गर्ने चाहना हुँदा युवतीले कस्तो संकेत देखाउछन् ? जान्नुहोस। 10 views
पौराणिक कथा : बाहुन, ठग तथा बोका9views
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? लिनुहोस् टीप्स! 8 views
सिभिल होम्स् डुब्ने खतरा, १० अर्बभन्दा बढी ऋणले थला पर्दै इच्छाराज तामाङ7views
ऐतिहासिक लमजुङ दरबार अपहेलित7views
विद्यार्थीका लागि रोजगार आजको आवश्यकता7views